PassbeeMedia: Comprehensive Mobile Coupon, obere akpa na iguzosi ike n'ihe | Martech Zone
PassbeeMedia: A Comprehensive Mobile dere, obere akpa na iguzosi ike n'ihe Platform
Thursday, July 17, 2014 Wednesday, July 16, 2014 Douglas Karr
PassbeeMedia na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ma kesaa mkpanaka-njikere Apple Akwụkwọ ọgụgụ, Google na Samsung obere akpa onyinye obodo, azụmahịa, na Kupọns ndị ahịa zuru ụwa ọnụ na usoro ikpo okwu dị mfe, nke na-eru ndị ahịa aka ebe ha nọ n'ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Ọ bụ ezie na nyiwe ahịa azụmaahịa ndị ọzọ na-enye atụmatụ ole na ole, PassbeeMedia nwere ngwa ahia zuru oke nke ngwa ahia ahia - tinyere Kupọns koodu Kupọns, ozi ederede, tiketi dijitalụ, obere akpa dijitalụ, iBeacon, mmemme iguzosi ike n'ihe na kaadị, URL ndị dị mkpụmkpụ, na ọbụna usoro mmemme whitelabel maka ụlọ ọrụ.
Otu esi amalite na PassbeeMedia
Họrọ otu n'ime atụmatụ ọnụahịa anọ zuru ezu nke ahụ dabara nke ọma na azụmahịa gị. Site na ndi oru aka ndi pere mpe na ndi pere mpe, rue ndi oru nta ma obu nnukwu ulo oru.
Mee onyinye gị - Họrọ site na otu n'ime ndebiri nke eji aka anyị ahazi iji hazie mkpọsa gị. Ma obu oburu na imeputa ihe ichoro ichoro iji ozo, inwere ike ichekwa ya dika ndebiri ohuru.
Kesaa & Ahịa - Jide ike nke Social Media Platform, SMS na Email iji jikọọ ndị ahịa gị niile.
Sochie onyinye gị maka ọnọdụ, nkewa onye ọrụ yana arụmọrụ ya site na iji dashboard nyocha PassbeeMedia.
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Passbeemedia!
Tags: apụl akwụkwọtiketi dijitalụobere akpaobere akpa googleibeakonKupọns mpagharaazụmahịa obodoonyinye obodoiguzosi ike n'ihemmemme iguzosi ike n'iheKupọns ekwentịmobile ahịa n'elu ikpo okwupassbeemediaqr Koodu Kupọnsụgwọ ọrụ mmemmeSamsung obere akpandu mkpụkpuSMSozi ederedewhitelable mkpanaka
Strikingly: Bubata LinkedIn n'ime Ebe Mara Mma, Mobile Ebugharị Resume Site
Nzọụkwụ 16 iji kpalie ọdịnaya Okike